I-Villa degli Ulivi - I-Airbnb
I-Villa degli Ulivi
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Salvatore
Phumula futhi uziphumulele kule ndawo enokuthula nobuhle enkabeni ye-Sicily. I-villa nendawo yokubhukuda, ezungezwe okuluhlaza kanye nezindawo zasemaphandleni zaseSicily, zenzelwe ukusetshenziswa ngokukhethekile futhi zilungele ukubungaza imindeni, amaqembu namaqembu abangane, abazothola izindawo ezinkulu endaweni yabo endaweni enembile futhi emnandi.
Ngaphandle, i-villa inezikhala ezinkulu nezindawo eziningana zokuphumula, zonke zinefenisha, futhi ikakhulukazi iveranda enendawo yokosa inyama nendawo yokubhukuda engamamitha angu-7x14, yokusetshenziswa okukhethekile kwezivakashi ezinamasevisi angaphandle neshawa.
Ingaphakathi le-villa, elinakho konke ukunethezeka, liqukethe, phansi, legumbi elikhulu lokuphumula elinendawo yomlilo, ikhishi, amasevisi nendawo yokulala enamakamelo okulala amathathu kanye negumbi lokugezela elinobhavu, futhi esitezi sokuqala indawo yokulala enamakamelo amabili kanye negumbi lokugezela. I-villa inesistimu yasebusika nehlobo lokupholisa umoya.
I-villa izungezwe okuluhlaza kanye nokuzola kwasemaphandleni, eduze ne-Pietraperzia.
Ngizotholakala njalo phakathi nokuhlala futhi ucingo lwami, noma lwabalingani bami, luhlezi luvuliwe.